Mitokana CBG betsaka | Vidiny tsara indrindra 2022
CBG mitokantokana ambongadiny nataon'i Redemperorcbd
Ny toeram-pambolena voninkazo hemp CBG tsara indrindra any Amerika dia mamokatra ny ambongadintsika / Mitokana CBG betsaka. Oregon dia mamokatra ny sasany amin'ireo karazana CBG tsara indrindra. Ireo tady ireo dia mety amin'ny fitrandrahana amin'ny fifantohana toy ny CBG crude, CBG full spectrum distillate, CBG malalaka THC malalaka ary CBG mitoka-monina.
Ny mitokana CBG dia azo atao saika mitovy amin'ny mitokana CBD. Manomboka amin'ny fomba fitrandrahana CO2 izahay mba hamokarana menaka CBG, izay be amin'ny CBGA sy ny zaza tsy ampy taona hafa amin'ny endrika asidra. Manaraka izany dia manadio ny menaka izahay mba hanesorana izay mety ho savoka, lipida ary chlorophyll. Rehefa vita ny distillate CBG dia "midona" izay sisa tavela CBG kristaly avy amin'ny menaka. Ny dingana farany dia ny fanesorana ny terpenes/cannabinoids. Roto-vap no dingana farany. Izany dia manala ny solvent sisa tavela ary manome antoka fa tsy misy metaly mavesatra, pestiside ary mikraoba ny vokatra. Ireo valiny ireo dia hamarinina any amin'ny laboratoara anankiroa roa.
Ahoana ny fampiasana CBG Isolate Torolàlana ho an'ny mpividy mahasoa
Ny toeram-pambolena voninkazo CBG tsara indrindra any Amerika dia mamokatra CBG Isolate ambongadiny. Oregon dia mamokatra ny sasany amin'ireo karazana CBG tsara indrindra. Ireo tady ireo dia mety amin'ny fitrandrahana amin'ny fifantohana toy ny CBG crude, CBG full spectrum distillate, CBG malalaka THC malalaka ary CBG mitoka-monina.
Ny mitokana CBG dia azo atao saika mitovy amin'ny mitokana CBD. Manomboka amin'ny fomba fitrandrahana CO2 izahay mba hamokarana menaka CBG, izay be amin'ny CBGA sy ny zaza tsy ampy taona hafa amin'ny endrika asidra. Manaraka izany dia manadio ny menaka izahay mba hanesorana izay mety ho savoka, lipida ary chlorophyll. Rehefa vita ny distillate CBG, dia "midona" ny kristaly CBG sisa tavela amin'ny menaka. Ny dingana farany dia ny fanesorana ny terpenes/cannabinoids. Roto-vap no dingana farany. Izany dia manala ny solvent sisa tavela ary manome antoka fa tsy misy metaly mavesatra, pestiside ary mikraoba ny vokatra. Ireo valiny ireo dia hamarinina any amin'ny laboratoara anankiroa roa.
Na dia tsy dia fantatra loatra aza ny CBG taloha, cannabigerol (CBG), dia cannabinoid mahazatra ankehitriny. CBG dia cannabinoid iray izay manana hery mahagaga hitantana toe-javatra maro, toy ny diabeta, ny fahaketrahana, ny androbe, ary ny hafa. Ny vokatra CBG dia tena ilaina. Mitombo ihany koa ny fivarotana vokatra CBG. Diso ny olona CBG ho an'ny. Samy hafa anefa izy ireo. CBG sy CBD dia Cannabinoid. Na izany aza, miavaka tsara ny CBG ka manana ny tsenany manokana ho an'ny vokatra CBG.
Inona no atao hoe CBG Isolate?
CBG mitoka-monina dia endrika CBG madio (efa ho 98% CBG) ary azo ampiana mora foana amin'ny vokatra rehetra. CBG dia nalaina avy amin'ny Hemp fototra. Mba hahazoana CBG madio dia nesorina avokoa ny akora hafa rehetra. Ny CBG avo lenta dia misy ambaratonga ambany sy akora hafa. CBG mitoka-monina no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay te hisoroka THC nefa mbola mijinja ny tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny cannabinoids.
Mitokana CBG betsaka Versus mitokana CBD betsaka
Ny CBD sy ny fampiasana azy amin'ny fitsaboana / fitsaboana dia voaporofo. CBG misy fitoviana. Samy tsy mampiakatra izany.
Ny CBD sy ny CBG dia afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny aretina ara-tsaina sy ara-batana tebiteby, adin-tsaina ary fahaketrahana. Ny CBD dia hita fa mahomby amin'ny fisorohana ny fisamborana. CBD, fanafody ankatoavin'ny FDA amin'ny fitsaboana ny androbe amin'ny ankizy dia voaporofo koa fa mandaitra. Ny CBG anefa dia mety hampiasaina amin'ny sehatry ny fanafody ho an'ny androbe. Ny fikarohana voalohany dia manondro fa izany ihany koa no mitranga. CBG dia fanampim-panazavana lehibe iray hafa cannabinoids tsy psychoactive.
CBG dia mifandray miaraka amin'ny receptors CB1 sy CB2. Samy hita ao amin'ny rafitry ny olombelona rehetra ireo. Ny receptors CB1 dia lehibe indrindra amin'ny rafi-pitatitra sy CB2 ao amin'ny rafi-kery fanefitra. Ny CBG dia afaka mifehy ny fiasan'ny vatana maro ary mitantana ny toe-pahasalamana isan-karazany.
Fitsapana mitokana CBG ambongadiny
Mitokana CBG betsaka sy ny fampiasana azy
CBG isolate dia vokatra azo avy amin'ny hemp maro samihafa. Ny CBG isolate dia mitovy amin'ny CBD isolate. Ny sasany amin'ireo fampiasana ireo dia voatanisa etsy ambany.
Ny isolate CBG dia azo ampiana amin'ny kapsily, takelaka ary vokatra hafa.
Lasa malaza kokoa ny vokatra misy ny CBG, toy ny crème sy lotion misy CBG. Lasa malaza kokoa ny CBG ary betsaka kokoa ny mety ho an'ny vokatra CBG eny an-tsena.
Azo ampiasaina hanamboarana menaka CBG ihany koa ny isolate CBG. CBG mitokana dia CBG madio. Noho izany dia mora ny manao kajy ny fatra sy ny herin'ny CBG eo am-pamolavolana vokatra.
Ny mitoka-monina CBG dia azo ampiasaina hampitomboana ny herin'ny CBG / CBD Tinctures.
CBG ISOLATE Chemical Diagram
Tontalin'ny Cannabinoid: 95-99+%
Loko: Vovoka fotsy madio
Fisehoana: Vovoka kristaly
Fonosana: Amidy amin'ny 100 grama betsaka sy 1 Kilogram litatra
Fiainana: 18 volana tsy misokatra. Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maizina
Formula molekiola: C21H3202
Lanja molekiola: 315.5 g/mol
Taona mitsonika: 126 F(62 C)
Teboka mangotraka ho antsika Mitokana CBD betsaka: 220 F (185 C)
tsy misy valiny miankina amin'ny 0 vato
Misy amin'ny stock